May 5, 2019 - MM Live News
ရန်ကုန်-ပြည်အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်က ပရလောကသားများ ကြီးစိုးနေတဲ့ မိုင်တိုင် ၈၆ ……
ရန်ကုန်-ပြည်အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်က ပရလောကသားများ ကြီးစိုးနေတဲ့ မိုင်တိုင် ၈၆ (ဖြစ်ရပ်မှန်) ရန်ကုန်-ပြည်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့ဒီနေရာ လက်ပံတန်းမြို့မှကြိုဆိုပါ၏ ဆိုတဲ့မြို့နယ်အစ ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားတဲ့ ၈၆ မိုင် ကနေ ၈၇/၈၈/၈၉ ၃မိုင်လောက်အကွာဝေး ချမ်းသာကုန်းဆိုတဲ့ရွာလေးကိုတွေ့ရင် ကားသမား/ဆိုင်ကယ်သမားများ အထူးသတိထား မောင်းနှင်ကြပါရန်လေးစားစွာသတိပေးပါရစေ။ လမ်းကိုကြည့်ပါ ဖြူးဖြောင့်ပြီးမျက်ကွယ်မရှိပါ။ သို့သော်အဲဒီလမ်းပိုင်းလေးမှာ မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေ ဘဝပျက်ခဲ့ ရတဲ့မိသားစုတွေ မပြန်လမ်းမြန်းသွားခဲ့ရတဲ့လူကြီးလူငယ်လူရွယ်တွေ ထောင်နန်းစံသွားရတဲ့ယဉ်မောင်းတွေ များခဲ့ရပြီ။ ပရိတ်လဲရွတ်မရ ကမ္မဝါလဲဖတ်မရ။ပုံမှန်လို ရက်ပတ်နဲ့ကိုဖြစ်နေတာပါ။ သေရင်သေ မသေရင် အသဲသန်။ ထို့ကြောင့် ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီနေရာလေးကို ရောက်ရင် မိမိမောင်းနှင်ရာ ယာဉ်ကိုအရှိန်လျှော့ပြီး ဂရုစိုက်မောင်းနှင်ကြပါရန် နယ်ခံတစ်ဦး အနေနှင့် လေးစားစွာသတိပေးပါရစေခင်ဗျာ။ ။ ။ Unicode Version ဖြင့်ဖတ်ရန် […]
ဖမ်းဆီးထားသော ကားထဲက ကလေးအလောင်း ၂ လောင်း နောက်ဆက်တွဲ သတင်း…
သတင်းနောက်​ဆက်​တွဲ . မိန်းကလေးတစ်ဦးမှာ မိန်းမတန်ဆာမှအူများထွက်လျှက်သေဆုံးနေကြောင်း သတင်းနောက်​ဆက်​တွဲ တောင်​ငူမြို ကားအတွင်းသေဆုံးသူမိန်းကလေးငယ် နှစ်ဦး သေဆုံးသူမိန်းကလေးငယ် နှစ်ဦးမှာ အသက် ၅ နှစ် ၆ နှစ်ခန့် အရွယ်ရှိကာ ပြီးခဲ့သော ၅ ရက်ခန့်က သေဆုံးနေသော အနေအထားဖြစ်ပြီး အနီးတွင်လည်း မူးဝေအော့အန်ထားခြင်း …. လက္ခဏာများနှင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးမှာ မိန်းမတန်ဆာမှအူများထွက်လျှက် အနေအထားဖြင့် မော်တော်ယာဉ် နောက်ခန်း၏ ထိုင်ခုံများရှေ့ ခြေနင်းနေရာတွင် အထက်အောက် သေဆုံးနေခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သေဆုံးနေသော ကလေးနှစ်ဦး အလောင်းအား တောင်ငူမြို့ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် တောင်ငူမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ရင်ခွဲရုံသို့ နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပုတ်ပွသေဆုံးနေသော ကလေးနှစ်ဦး အလောင်းအား နာရေးကူညီမှု မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် တောင်ငူဆေးရုံသို့ […]
မီးပွိုင့်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေကြောင်းကြံတဲ့သူ သူဘာကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေကြောင်းကြံတဲ့သူအကြောင်းပြောပြီ….
၁.၅.၂၀၁၉နေ့က ကသာညဈေးတန်းပေါက်ဝမီးပွိုင့်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေကြောင်းကြံတဲ့သူအကြောင်း သူဘာကြောင့်သေချင်တာလဲ ဂွင်ဖန်တာလား အမျိုးမျိုးထင်ကြေးတွေပေးလာတော့ အတိအကျလေးဖြစ်အောင် စုံစမ်းပီး ရေးသားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ …. သူ့နာမည်က…ဦးစိုးညွန့် အသက်က ၅၂နှစ် သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ် သမီးကအသက်၁၁နှစ်သားလေးက၇နှစ်ပါ သူတို့မိသားစုဟာမဘိမ်းမြို့နယ် ရွှေကျောင်းကုန်းကျေးရွာမှာနေထိုင်ကြပါတယ်…. သူ့အမျိုးသမီးက သူ့သားအငယ်လေး၁နှစ်သားမှာ ဆုံးသွားပြီး သားသမီးတွေကိုလယ်ယာလုပ် ကြုံရာအလုပ်တွေလုပ်ပီးပြုစုပျိုးထောင် ပေးခဲ့တယ် …. အာ့လိုနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့၃လကျော်က သူဟာအခင်းထဲသွားတဲ့လမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီးသူ့ညာဘက်ခြေဖနောင့်ရိုးကျိုးကြေသွားလို့ ဗန်းမော်ဆေးရုံမှာသွားရောက်ကုသခဲ့ပါတယ်…. ငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့် ဆေးရုံကဆင်းခဲ့ပြီး ရွာပြန်ခဲ့အလုပ်ကမလုပ်နိုင်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲလာနေတဲ့အချိန် ငါးအိုးကျေးရွာမှာ သီလရှင်ဝတ်နေသောအမကြီးဖြစ်သူဒေါ်ရူပစံမှအလှူ ခံရသမျှလေးနဲ့ဆေးကုပေးဖို့ကသာကိုလေးယောက်စလုံးတက်လာကြပါတယ် …… ကသာဆေးရုံမှာဆေးကုသခံနေတုန်းသားလေးကိုခေါ်ရပ်ကွက်ထဲလှည့်လည်တောင်းစားရင်း အမဆွမ်းခံကြွေးတာလေးစားနေရတာစိတ်မကောင်းလို့ထင်ပါရဲ့…. သူ့အမကိုလဲချစ်ကြောက်ရိုသေ ရောဂါဝေဒနာလဲခံစားရ သားသမီးတွေလဲစားချင်တိုင်းမစားရ အာ့ဘဝတွေကိုသူမခံစားနိုင်ပဲ ရူးမိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်မှာပါ ….သူ့ရဲ့ရူးမိုက်မှုဟာ တပါးသူပါဒုက္ခရောက်မယ်လို့ အာ့အချိန်သူစဉ်းစားမိရဲ့လား…. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စာနာစိတ်ကလုပ်ယူစရာမလိုပါဘူးလေ ခုလိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြောပြသော လူနာရှင်နဲ့မိသားစုကိုမနက်ညထမင်းကိုလူသားချင်းစာနာစွာကျွေးမွေးခဲ့သော ကသာ မြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးမျိုးအောင်အားလူနာရှင်ကိုယ်စားကျေးဇူးတင်လျှက်-
မန္တလေးကျုံးဘေးတွင် အပန်းဖြေအနားယူနေသူများကို ဆိုင်ကယ်စီးအုပ်စုက ရဲဒင်းဖြင့်ဝင်ခုတ်မှုဖြစ်ပွား….
မန္တလေးကျုံးဘေးတွင် ညအချိန် အပန်းဖြေအနားယူနေသူများကို ဆိုင်ကယ်စီးအုပ်စုက ရဲဒင်းဖြင့်ဝင်ခုတ်၊ လေးခွဖြင့်ပစ်ခတ် မောင်မင်းမော်၊ မေ-၅ မန္တလေးမြို့ ကျုံးအရှေ့ခြမ်း (၆၆)လမ်းပလက်ဖောင်းဘေးတွင် ညအချိန် အနားယူအပန်းဖြေနေသည့် လူငယ်(၃)ဦးကို ဆိုင်ကယ်စီးအုပ်စုတစ်စုက ရဲဒင်းဖြင့် ၀င်ခုတ်၊လေးခဖြင့် ပတ်ခတ်ခဲ့သည့်အတွက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ မေလ(၄)ရက် ည(၉)နာရီဝန်းကျင်ခန့်က ကျုံးဘေးတွင် အပန်းဖြေဆိုင်ကယ်စီးနေသည့် လူငယ်(၃)ဦးကို အခြားဆိုင်ကယ်(၃)စီးဖြင့် လူ(၈)ဦးခန့်က ရန်ပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒဏ်ရာရလူငယ်များကို မန္တလေးဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ပေးခဲ့သည်ဟု မန္တလေးမြို့ နန်းတော်ရှေ့လူမူကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ “အခုတ်ခံရတဲ့ကလေးတွေက ရေသန့်စက်ရုံကလို့ ပြောတယ်။ သူတို့ ကျုံးဘေးမှာ ဆိုင်ကယ်သုံးစီးနဲ့ လူ(၈)ယောက်လောက်က ဝိုင်းလုပ်သွားတာတဲ့။ တစ်ယောက်ကတော့ ခေါင်းထိသွားပြီး ဒဏ်ရာနည်းနည်းများတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ မစိုးရိမ်ရပါဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်း သို့မဟုတ် […]
ပြိုင်ပွဲအပြီး အွန်လိုင်းတခုလုံးတုန်လှုပ်သွားစေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံမှုပြောစကား ….
အောင်လအန်ဆန်နဲ့ ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအပြီး သီးသန့်တွေ့ဆုံခြင်း အောင်လအန်ဆန်နဲ့ ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအပြီး သီးသန့်တွေ့ဆုံခြင်း အောင်လအန်ဆန်ကတော့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ….. မစ်ဒယ်ဝိတ်ကာကွယ်ပွဲမှာလည်း လက်ဘနွန်က ခရာကီကို အလဲထိုးနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ပြောရင် ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်တတ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်ကို DuwunSports က ပွဲအပြီး သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ရာမှာတောာ့ အခုလိုပဲ ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန် Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် အောငျလအနျဆနျနဲ့ ခနျြပီယံကာကှယျပှဲအပွီး သီးသနျ့တှဆေုံ့ခွငျး အောငျလအနျဆနျနဲ့ ခနျြပီယံကာကှယျပှဲအပွီး သီးသနျ့တှဆေုံ့ခွငျး အောငျလအနျဆနျကတော့ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ….. မဈဒယျဝိတျကာကှယျပှဲမှာလညျး လကျဘနှနျက ခရာကီကို အလဲထိုးနဲ့ ကာကှယျနိုငျခဲ့ပွနျပါတယျ။ ပွောရငျ ပွောတဲ့အတိုငျး လုပျတတျတဲ့ အောငျလအနျဆနျကို DuwunSports က ပှဲအပွီး သီးသနျ့တှဆေုံ့မေးမွနျးခဲ့ရာမှာတောာ့ အခုလိုပဲ ဖွကွေားပေးခဲ့ပါတယျ။ ဗီဒီယိုဖိုငျကွညျ့ရနျ
လူ အဖွဲ့လိုက်ထိုင်နေတုန်း တစ်ယောက်ထဲကိုပဲ မိုးကြိုးသုံးခါဆက်တိုက်ပစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်….
ကြောက်စရာ ကောင်းသလို သတိထားဆင်ခြင်စရာ သင်ခန်းစာအဖြစ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုလိုမိုးရာသီမှာ မိမိကိုယ်မှာ သံ သတ္ထု ကြေး စတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကူးနိုင်သော ပစ္စည်းမျိုးတွေ ကပ်တွယ်ပြီး မထားကြဖို့ သင်ခန်းစာအဖြစ် မှတ်ယူကြစေလိုပါသည်။ သတ္တု သော့တွဲကြောင့်မိုးကြိုးပစ်ခံရကာ သေဆုံး May 4,2019 ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီ ခရိုင် နာနတ်သီး စိုက်ခင်းမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူအသက် (၃၀) အရွယ် ကမ္ဘောဒီယား နိုင်ငံသားတစ်ဦးကို တဆက်တည်း မိုးကြိုးသုံးကြိမ်ပစ်ခံရလို့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေ စုထိုင်နေကြတာကို သူ့ကိုသာ မိုးကြိုး ပစ်ခဲ့တာဟာ သူ့ ကိုယ်မှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ သတ္တု သောတွဲတွေကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ တွေကပြောပါတယ်။– SAW unicode ကွောကျစရာ ကောငျးသလို သတိထားဆငျခွငျစရာ သငျခနျးစာအဖွဈ […]
တောင်ငူမြို့ အမှတ် ၂ စခန်းအနီး ကားအတွင်းမှ ပုပ်ပွနေတဲ့ ကလေးငယ် ၂ ဦး အလောင်းတွေ့……
5.5.2019 နံနက်ပိုင်းတွင် တောင်ငူမြို့ အမှတ် ၂ စခန်း အနီး ရပ်ထားသည့် ကားအတွင်းမှ ကလေငယ် ၂ ဦး ပိတ်မိသေဆုးံနေပြီး ပုပ်စော်နံမှ သိရသည်ဟု ဒေသခံတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ ကနဦးသိရပါတယ် ။ အဆိုပါ အလောင်းများအား တောင်ငူဆေးရုံကြီးသို့ သယ်ဆောင်သွားသည်ဟု မျက်မြင်တစ်ဦးကပြောပါတယ်။အဆိုပါကားသည် ဖမ်းဆီးထားသော ကားအတွင်းမှ ဖြစ်သည်ဟု အတည်ပြုလို့မရသေးတဲ့ သတင်းရပ်ကွက်မှ သိရပါတယ်။ ကလေးငယ်များအား သတ်ပြီး ဖမ်းဆီးထားသောကားအတွင်း လာထားသွားသည်ဟုလည်း မြို့ခံတစ်ချို့က ဝေဖန်နေကြပါတယ် …..ဖြစ်စဉ်အမှန်ကို သိရှိရန်အတွက်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့က အပူတပြင်း စုံစမ်း စစ်ဆေးနေပါတယ်။ နေလင်းအောင် (တောင်ငူ) Unicode 5.5.2019 နံနကျပိုငျးတှငျ တောငျငူမွို့ အမှတျ ၂ စခနျး […]
မနက်ဖြန်မင်္ဂလာဆောင်မယ့် သတို့သမီးလောင်း ကြိုးဆွဲချသေဆုံး ကနဦးသတင်းပါ ။အပြည့်အစုံ ဆက်လက်တင်ပေးပါမယ်။ မနက်ဖြန် 5.5.2019 မင်္ဂလာဆောင်မဲ့သူပါ….. ကျွနော်တို့အိမ်မှာ စက်ချူပ်လာသင်တဲ့အစ်မပါ မွန်အမျိုးသမီး ကြာကန်မြို့ ဝေသာလီအရှေ့ပိုင်း စ်ိတ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ကာ အတွေးမှားပြီး … အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဆွဲကြိုးချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား (အဘယ့်ကြောင့်ဆိုတာ သေချာမသိရသေးပါဘူး)…… View Point Mawlamyine ရမျာင် ကရဝိတ် Unicode ကနဦးသတငျးပါ ။အပွညျ့အစုံ ဆကျလကျတငျပေးပါမယျ။ မနကျဖွနျ 5.5.2019 မင်ျဂလာဆောငျမဲ့သူပါကြှနျောတို့အိမျမှာ စကျခြူပျလာသငျတဲ့အဈမပါ မှနျအမြိုးသမီး ကွာကနျမွို့ ဝသောလီအရှပေို့ငျး ဈိတျပွောငျးလဲမှုဖွဈကာ အတှေးမှားပွီး ….. အခြိနျအနညျးငယျအတှငျးမှာ ဆှဲကွိုးခသြဆေုံးမှုဖွဈပှား (အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုတာ သခြောမသိရသေးပါဘူး)……